Uhlobo oludala: yintoni na, iimpawu eziqhelekileyo kunye nokusetyenziswa rhoqo | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 29/04/2022 15:45 | Imithombo, Izibonelelo
Kumaxesha amandulo, iifonti ezininzi zazikho kwaye zaziyilelwe injongo yokuyila izinto ezintsha. Ngokuqhubela phambili kwetekhnoloji entsha, uninzi lwezi fonti ziye zavela, njengoko zinjalo noyilo. Ngesi sizathu, namhlanje sinokufumana iifonti ezininzi kuzo zonke izimbo kunye noyilo olunokwenzeka.
Akunakulindeleka ukuba uyilo luye lwavela ngendlela efanayo neefonti, kuba zombini izinto zihamba kunye. Kule posi, Size kuthetha nawe malunga noonobumba bakudala, ezi ntlobo zochwethezo ziyinxalenye yento esiyaziyo namhlanje, ukusetyenziswa kwazo kunye nezona mpawu ziqhelekileyo nezibalaseleyo.
1 Iintlobo zohlobo zakudala: yintoni?
1.1 Iimpawu kunye nokuSebenzisa
2 Imizekelo yohlobo lwakudala
2.1 ubugcisa bamaGrike
2.2 Imithombo yaseRoma
2.2.1 Uluhlu lochwethezo lwamaRoma
2.3 Iintlobo zochwethezo zamaxesha aphakathi kunye neRenaissance
2.4 Imithombo yenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX
2.5 imithombo yenkulungwane yama-XNUMX
Iintlobo zohlobo zakudala: yintoni?
Uhlobo oludala lokubhala luchazwa, njengoko igama labo libonisa, ngokuba yimithombo enento yakudala ethile ngokubhekiselele kwabo sibaziyo. Ziifonti ezikhethekileyo ngokwendlela yoyilo lwazo, ekubeni banembali eninzi emva kwabo kwaye kubaluleke kakhulu ukukwazi ukuqonda ukuba ziyilwe njani kwaye zisetyenziselwa ntoni.
Ngamanye amaxesha, ukuba siyabazisa kwicandelo loyilo, singongeza ukuba ziifonti eziye zasetyenziswa kakhulu kwintengiso okanye kunxibelelwano, kuba zicacile kwaye zifundeka kakuhle. Ngale ndlela, kukwabalulekile ukongeza ukuba, nangona beneminyaka ethile, kuba umntu, kubaluleke kakhulu ukuba akhumbule ixesha elidlulileyo kwaye angalokothi athethe ngcono, kuba ngale ndlela sinokufezekisa ngakumbi. umtsalane wokubonwayo kunokuba sibona. Umzekelo, ezi ntlobo zefonti zifanelekile kakhulu ukuba sizisebenzisa kwiivenkile zamandulo, okanye iivenkile apho kuthengiswa iimveliso ezinokungacaci, njl.
Ngesi sizathu, akufuneki singaze sijongele phantsi nayiphi na ifonti, kanye njengelizwi elidumileyo elithi "musa ukugweba incwadi ngeqweqwe layo", kwenzeka okufanayo ngolu hlobo lweefonti kunye noyilo lwazo olunokubonakala luyinto yakudala kuthi kodwa abaninzi abakwenzi oko. siqonde ukuba yonke into esiyaziyo namhlanje iyinxalenye yezo ngcambu.
Iimpawu kunye nokuSebenzisa
Ziyimithombo ethi, nangona xa uqala ukuyijonga ayibonakali njalo, ihlala imelwe kakhulu ngoku. Umzekelo U kakhulu uphawu ziibrendi. Ezinye iibrendi zikholisa ukusebenzisa olu hlobo lweefonti ezindala kuba banikela umlingiswa kunye nethoni esebenzayo kwiso lenyama. Abazi kancinci kukuba singqongwe kwaye singqongwe ngolu hlobo lweefonti kuyo yonke indawo, nokuba kusezivenkileni okanye kwiivenkile ezinkulu.
Kangangamashumi eminyaka, eyona nto isetyenziswa rhoqo ibisoloko ingumbhalo osebenzayo okanye izihloko ezinkulu. Nangona kuyinyani ukuba ngoku, uninzi lweetekisi ezisebenzayo esizifumana ezincwadini, ziqala kwifonti yamaRoma okanye i-sans serif. Kodwa Kuya kufuneka kuqatshelwe ukuba, okwangoku, sihlala sizifumana kwiilebhile ezinkulu, kuba zithathwa njengefonti enomtsalane.
Okokugqibela kodwa okungakuncinananga, ezi ntlobo zefonti zifunyanwa zineelayisenisi ezinkulu kwamanye amaphepha ewebhu e-intanethi, ngoko akukho nzima ukuzifumana, kuba sinamawaka kunye namawaka amaphepha apho unokukhuphela khona.
Imizekelo yohlobo lwakudala
Iintlobo zohlobo lweArt Greco zezo fonti zisuka kwiGrisi yamandulo. Okwangoku, iimveliso ezininzi ziye zagqiba ekubeni zizisebenzise kwiimpawu zazo, ngaphandle kokuya phambili, i-brand eyaziwayo ye-yoghurts Danone., isetyenziswe olu hlobo loyilo kwenye yeemveliso zalo, apho libhekisela kwi-yogurt yamaGrike yakudala.
Luyilo olusetyenziswa ngokubanzi kumacandelo afana ne-gastronomy, kuba ikhupha kwaye isithutha kwiivenkile zamandulo zamaGrikhi kwizikwere. Ngaphandle kwamathandabuzo, indalo emangalisayo isenza sibuyele umva ngexesha.
Umthombo: Iitshathi zeNétor
Omnye umzekelo obalaseleyo ngoochwephesha bamaRoma. Iintlobo zochwethezo zamaRoma zezo fonti ziyilwe ngokukrola amatye. Ngapha koko, ngoku zezona zisetyenziswa kakhulu kwaye zithathwa njengeefonti ze-serif. Uyilo lwazo ludidi oluphezulu kodwa luhlala lufundeka kakuhle. Ke ngoko, zifumaneka ikakhulu kwiitekisi eziqhutywayo nasezincwadini.
Ezinye zazo zibandakanya kuphela oonobumba abakhulu, ekubeni kuphela ngoonobumba abakhulu ababeqhele ukukrolwa. Ngokumalunga nolu hlobo loyilo, kukuba amanani ahlala ebandakanya kwii-numerals zamaRoma. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngumthombo ongashiyi nto.
Uluhlu lochwethezo lwamaRoma
Ixesha elitsha roman
Iintlobo zochwethezo zamaxesha aphakathi kunye neRenaissance
Umthombo: Iintlobo ezinomlinganiswa
Ngokufika kweenkolo ezinjengobuKristu, inkcubeko yamaRoma yehla ngokuqatha. Ngoko uyilo olutsha kunye neefonti zayilwa kwaye zadalwa, zilungelelaniswa neemeko zelo xesha. Iifonti zokuchwetheza zaba ziifonti ezingqukuva kakhulu. Kwiminyaka kamva, oko sikwaziyo njengoonobumba beGothic kwavela, okwabonakala kuxhaphake kakhulu kumaxesha aphakathi. Uninzi lwala magama lubandakanya oonobumba abancinci kuphela, bambalwa kakhulu abayilwe ngonobumba abakhulu ngokungafaniyo noonobumba besiRoman sibabonile ngasentla. Ngaphandle kwamathandabuzo, ixesha lembali kakhulu.
Imithombo yenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX
Imithombo iqhubekile ukudalwa kwiinkulungwane apho i-classicism igcinwe kwaye yahlala iminyaka. Siyazazi iifonti ezinje ngonobumba odumileyo wecursive, owathi kwezi nkulungwane waba yifonti esemthethweni.
Kwiminyaka kamva, emva kokuveliswa kokushicilela. UBodoni kunye nomntu okhuphisana naye oyintloko, uDidot, benze iifonti ezahlukeneyo zeserif. Okwangoku ezi fonti zisasebenza. Ngapha koko, i-Adobe iyaqhubeka nokubagcina kwiphakheji yayo yefonti kwaye sele behlile kwimbali njengenye yeefonti ezisetyenziswa kakhulu. Ngokungathandabuzekiyo, ixesha elidlulileyo lihlala lingoku.
imithombo yenkulungwane yama-XNUMX
Inkulungwane yama-XNUMX yayizele zizinto ezintsha ezintsha kunye nenkqubela phambili yezobuchwepheshe, kangangokuba inani elingapheliyo leendlela ezintsha zokuchwetheza ezibalaseleyo zaziyilwa. Le nkulungwane yayibunjwe kukusetyenziswa koonobumba besiGoth kunye noonobumba, ababekho kunye nezizukulwana ezitsha ezinjengokuchwetheza okwenziwa ngelothe, ukuze zisetyenziswe. Ngale ndlela zagqityezelwa zaza zachazwa ngokweenkcukacha ukuze zisebenze ngokufanelekileyo kuyilo lwazo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ummangaliso weefonti ezisasetyenziswayo namhlanje kwaye zikho kwaye ziya kuhlala nathi, iminyaka emininzi, ngaphandle kwamathandabuzo.
Iintlobo zochwethezo zakudala zikwazile ukusihambisa ngaphaya koko sikwaziyo nesikwaziyo namhlanje.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi ngolu hlobo lwemithombo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » amagama amadala
Izakhelo zokubhala iiresiphi zokupheka zeWord